Achọrọ: mkpuchi ahụike maka ndị ọbịa na European Union
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Andorra » Achọrọ: mkpuchi ahụike maka ndị ọbịa na European Union
Nwere ike 25, 2017
You bụ nwa amaala obodo nke EU chọrọ ka ọ bụrụ visa maka ịbanye? Achọrọ visa maka ụmụ amaala ahụ ma ọ bụrụ na ha bi na mba dịka United States ma ọ bụ Canada. You bụ nwa amaala nke mba ọ bụla na-abụghị Europe na-eme atụmatụ ịnọ ogologo oge na Europe maka ọrụ ma ọ bụ oge ezumike?
Ọ bụrụ na azịza gị bụ ee, ị nwere ike icheta Obama Care ma ọ bụ nlekọta ahụike maka mmadụ niile. Na Europe, ọ bụghị naanị ụmụ amaala chọrọ mkpuchi ahụike, kamakwa ndị ọbịa. Ewezuga bụ nleta oge dị mkpirikpi nke ụmụ amaala nwere ike ịbanye na EU na-enweghị visa. Iji mee ka ndị consulates nye akwụkwọ ikike maka ikike maka mpaghara Schengen, ihe akaebe banyere mkpuchi ahụike dị mkpa.
Iji mee ka ndị nnọchi anya mba EU wee nye akwụkwọ ikike maka nke mba Schengen, o doro anya na ọ dị mkpa ka e kpuchie ya.
Ihe ị ga-achọ ịma mgbe ịzụrụ mkpuchi.
Insurance ga-adị ire na mba EU niile na mba Schengen
Insurance ga-ekpuchi oge gị dum ọnụnọ, ọbụna ma ọ bụrụ na dị nnọọ transiting
Ego kacha nta maka mkpuchi gị ga-abụ EIRP 30,000.00
Mba EU ọ bụla nwekwara iwu mba akọwapụtara nke ị kwesịrị ịlele.
Dịka ọmụmaatụ, na Germany, mkpuchi gị ga-ekpuchi 100% nke ụgwọ ụlọ ọgwụ ọ bụla, n'agbanyeghị ma ị nwere usoro ịgwọ ọrịa ma ọ bụ kwenye. Nke a ga-enwerịrị ma ọ bụrụ na onye ọkachamara ga-ahụ gị. Ego a na-akwụ n'akpa uwe maka mkpuchi ọ bụla enweghị ike ịfe 5,000 Euro.
Ọ bụrụ na ịchọghị visa maka mbido mbata na obodo ị na-aga, ịkwesịrị ịnye akaebe nke mkpuchi ụbọchị 31 ka ị gachara. A zụrụ ndị ọchịchị nke ọma ka ha lelee nke a. Apụghị ndị diplomaeti.
Ọ dị mfe na ngwa ngwa ịzụta mkpuchi dị otú ahụ.
Ndị ọkachamara na-atụ aro ịkpọtụrụ mkpuchi dị ka nke a Ụlọ ọrụ BDAE Gruppe, ebe ọ bụ na otu a nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mpaghara a.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma enwere ike ịchọrọ maka ndị na-abụghị ndị EU ka ha hụkwa na ndị ezinụlọ. Carebọchị ndị a nlekọta ahụike nwere ike ịbụ oke ọnụ.
Ọbịbịa njem nleta, dịka ọmụmaatụ, na-enye mkpuchi zuru ezu maka naanị EUR 1.10 kwa ụbọchị.
More ozi na Insurance mkpuchi maka ndị mba ọzọ na Germany .
Lulọ oriri na ọ celebụ Camụ Camlux na-agba nnukwu mmeghe dị ka ụlọ nkwari akụ mbụ na Kowloon Bay
Onye ode akwukwo ego: Mnuchin: US na-enyocha akwụkwọ ikike Boeing na Airbus iji ree ụgbọ elu Iran